War Deg Deg Ah : Ciidamo katirsan Maleeshiyaadka Maamulka Putland ayaa goordhaw la wareegay Xarumo muhiim ah oo kuyaala waqooyga Gaalkacyo!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg Deg Ah : Ciidamo katirsan Maleeshiyaadka Maamulka Putland ayaa goordhaw la wareegay Xarumo muhiim ah oo kuyaala waqooyga Gaalkacyo!!
War Deg Deg Ah : Ciidamo katirsan Maleeshiyaadka Maamulka Putland ayaa goordhaw la wareegay Xarumo muhiim ah oo kuyaala waqooyga Gaalkacyo!!
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in maanta ciidamo gadoodsan oo katirsan kuwa maamulka Puntland ayaa la wareegeen xarunta Bangiga Keyda lacagaha gobolka Mudug ee kuyaala Waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Sida aan Wararka ku heleyno ciidamadaas hubeesan ayaa ka gadooday mushaar la’aan la sheegay in dhowr bilood lasoo daristay, waxayna ciidamada gabi ahaan diideen in Bangiga la galo ama loo soo dhawaado.
Ciidamada Gadoodsan ee la wareegay Bangiga kuyaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa gabi ahaan xiray wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa, waxa ayna ciidamadan yihiin kuwa aad u hubeesan oo wata gaadiidka dagaalka.
Masuuliyiin katirsan maamulka Puntland ayaa wada dadaalo ay xal ugu raadinayaan ciidamada gadoodsan ee la wareegay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo, waxa ayna masuuliyiinta wadahadalo la fureen ciidamada gadoodsan .
Ciidamo katirsan Maamulka Puntland Sida uu Cabdi wali Gaas u nugu Noqday Madaxweyne waxay bilaabeen inay Gadoodin kasameeyaan Garoowe, Boosaaso iyo meelaha ee Ciidankaas kusugan yihiin oo dhan ayaa marar badan sidan oo kale ula wareegeen bangiyo iyo xarumo kuyaala magaalooyin katitrsan maamulka Puntland, ciidamadan ayaana cabasho ka ah mushaar laa’an lasoo daristay waxuuna mushaarkooda aaday ay ku baxeen.
Previous PostQof waliba qaab dadban waxa uu kuu sheegayaa ama ka dareemeysaa "Waxaan Raadineynaa Nolol Wanaagsan" laakiin....................!! Next PostAkhriso:- Xasuusta Maanta oo kale Qaraxii Hotel Shamow oo lagu dilay Mucalimiin, waalid iyo Arday wax tar lahayd!!